Nnukwu uru ... E kpughere ihe nzuzo Ugbu a! | Martech Zone
Tọzdee, Eprel 23, 2009 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Mba, spammer ebusoghị saịtị m agha. Nke a ka Doug na-ede post a ma m na-eme ya n'okpuru aka m.
You nwetụla mgbe ị gara na ibe weebụ na-akpọsa na ha ga-ekpughe ihe nzuzo niile nke nsogbu ị na-achọ idozi? Peeji ahụ bidoro site na ederede, ederede ndị na - eme nzuzu gị, ihe onyonyo siri ike, ihe akaebe gbara ọkpụrụkpụ… na - adọta gị na ibe gị ruo mgbe ị na - ebuli kaadị akwụmụgwọ gị n'akpa gị.
Mgbe m na-arụ ọrụ na mail, ana m ele ọrụ aka Pat Coyle ogologo oyiri leta ndị nwetara nzaghachi dị egwu. Ekwenyere m enyi na onye dere ederede Erik Deckers bụ onye ofufe na onye edemede nke ogologo akwụkwọ. Na agbanyeghị ngwaahịa, onyinye nke ndị edemede a bụ ihe ịtụnanya ...… na-afọ obere ka akpọnwụ gị site na njedebe akwụkwọ ozi ahụ.
Maka ụfọdụ ndị na - ere ahịa, ụdị ederede a na - asọ oyi ma, oge ụfọdụ, ha kwenyere na ọ bụ aghụghọ. Enweghị m ike ịsị na m kwenyere. M nwere ike mfe ịmata ya mgbe m na-ahụ ya, ma mgbe ụfọdụ, ọ na-esi ike na-atụgharị. Ebudatara m (ma kwụọ ụgwọ) maka akwụkwọ ole na ole n'oge m - echekwara m na enwetala m ego m.
Ọtụtụ n'ime ndị folks a bụ ozi marketers, ịgbagharị na ịmekọrịta na ebook, webinars na nzukọ. Ha mepere ufodu nnwere onwe ha n’adighi gi nma ma nwekwaara gi ego iri puku kwuru nde site na oge ighachiri ogbako ha.
Cost is ikwu, ezie na… ma ọ bụrụ na ị nwetara nkwado nkwado nke ndị a folks na ị dị njikere itinye ihe niile i nwere na ya… ị nwere ike ime ka a otutu ego. Ka m na-ele ndị na-agụ blọgụ na saịtị m, enwere m ike ịhapụ nnukwu ego site na ịgbasoghị nzọụkwụ Joel wee bụrụ onye na-azụ ahịa ozi n'onwe m.
Ọtụtụ ndị mmadụ na-akpakọrịta ịbụ Internet Millionaire na ntụpọ-com craze nke ngwụsị afọ ndị 1990… Ma obere ndị otu Internet Marketing Pioneers nọ nwayọ na-eme akụ ha n'ịntanetị tupu onye ọ bụla Yahoo'd ma ọ bụ Googled okwu ahụ "ịme ego n'ịntanetị". Ọtụtụ n'ime ha wuru alaeze ukwu ha gburugburu okwu anọ dị mfe ma dị oke ike… Pịa ebe a iji nye iwu.
Joel Comm's New York Times Onye Kachasị Mma, Pịa EBE A ịtụ, adịghị edemede ahia ma obu akwukwo banyere otu esi abu nde mmadu. Kama nke ahụ, ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị na akụkọ mmalite nke thentanetị na ndị folks mbụ ritere uru ebe ahụ - ụfọdụ n'ime ha anụbeghị banyere ha. Dị ka Akara Joyner na-ekwu, “Nke a bụ otu ntakịrị ndị, na mmalite nke mgbanwe teknụzụ, hụrụ ohere wee jide ya.”
E nwere ndị na-ere ahịa ịntanetị na ndị na-ere ahịa n’ Internetntanet. Amaara m na ha na-ada otu ihe, mana otu mgbe na-ele ndị ọzọ anya dị ka nwata akwụkwọ ụlọ akwụkwọ nzuzo nke na-agwa onye ọ bụla nọ n'ụlọ akwụkwọ ọha na eze okwu. N'okwu a, agbanyeghị, ọ bụ nwata akwụkwọ ụlọ akwụkwọ ọha na-emeri… na-ebugharị nnukwu uru na ụzọ na-abụghị ọdịnala. Ọ fọrọ nke nta na-ada ka ọ bụ ezie na ọ bụghị na elu na elu… ma njikọ aka niile bụ afọ ofufo na ọ bụ nnọọ nnukwu ụlọ ọrụ.
Anaghị m eleda ndị ahịa Internet a anya. Ka anyị leba anya n’akụkọ ihe mere eme na, dịka ọmụmaatụ, tulee Corey Rudl (RIP) ka Pets.com, o doro anya onye nwere ike ịnọrọ na talent. O dokwara anya onye tufuru ego ha ma mebie ego ha nwetara. Enwere m oke egwu maka ikike ndị ọchụnta ego a na-abawanye azụmaahịa dị egwu, na-atụgharị okporo ụzọ n'etiti ibe ha (karịa ịsọ mpi), na-enye ndụmọdụ ma na-akụziri ibe ha ihe na-arụ ọrụ ma na-eji ngwa ọrụ ọ bụla ha nwere iji nwalee ma mepụta nnomi na-atọghata.
Adịghị m onye ahịa ahịa nke na-akwa emo ndị ọchụnta ego a, echere m na mkpebi ha na akụkọ ha na-atọ ụtọ. Akwụkwọ Joel bụ akụkọ mgbe akụkọ banyere ụfọdụ ndị ahịa ịntanetị gara nke ọma. Akụkọ banyere ụmụ okorobịa na-amụ anya abalị niile na-achịkwa ọrụ ha, na-ehi ụra na-arụ ọrụ, na-achụpụ ha ma bụrụ ndị nde mmadụ bụ ezigbo ihe mmụọ nsọ nye ndị ọchụnta ego ọ bụla. Gụ akụkọ na-eme ka ọbara gị na-agbapụta! The nkezi CMO ma ọ bụ Director nke Marketing nwere ike ịmụta ọtụtụ ihe na otu a.
N'abalị Tuesday ka m gwụchara Ndị Super Crunchers n'ụgbọ elu na San Francisco na m mechara Pịa EBE A ịtụ nke ụtụtụ a na - efe efe azụ - ibe 279. Ọ bụ nnukwu ọgụgụ - hụ na ị buliri ya mgbe ị nwere ohere.
Ọbụna m na-eche na ebook na nso nso m!
Tags: akwụkwọ nyochapịa ebe a iji nye iwuJoel comm
Ọmarịcha post, Doug! Apụrụ m ịgwa ha na akwụkwọ ndị ahụ “nyere gị nsogbu.” Ihe ahụ bụ, amaara m kpọmkwem ụdị nnomi ị na-ezo aka. Enwere m ụlọ akwụkwọ na ya mgbe m na-etolite na ụlọ ọrụ mgbasa ozi ahịa na-ere ahịa ebe m nwere mkpokọ ngwaahịa iji tụọ, iji chọta MY n'ike mmụọ nsọ maka akwụkwọ ozi m na-esote, yana ụfọdụ nnukwu akwụkwọ ojii site n'aka otu nwoke ochie onye kwesiri ibu onye isi ochichi nke ahia. (Adị m nwata n'oge ahụ, na-amụ banyere akụkọ ifo nke DM bụ ndị mepụtara ihe dịka Johnson Boxes na snap-paks.) Ka o sina dị, a gbara m aka ka m dee akwụkwọ ozi 6 na-ere ndebanye aha na Consumer Reports (ọ bụ "leta ogologo") echiche). Dee ya m mere, mana onye ahịa ahụ ezigaghị ya. M ka na-amụ ọrụ m mgbe ahụ, ọ ga-esiri m ike.
Echetara m mgbe mbụ m bidoro ịgụ akwụkwọ ozi nzaghachi, na-enwetabeghị ọtụtụ n'ime ya n'onwe m n'oge m nọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị na kọleji (abụ m onye na-ede akwụkwọ ozi na-anụ ọkụ n'obi na mba ofesi, ndị enyi na ndị ikwu m), echere m na leta ndị ahụ na-ada ụda ozioma.
Ee, ebook na-ada ụda nke ukwuu! Gaa maka ya!